भारतमा नेपालीहरु अलपत्र, दिल्लीमा दुतावास छ की छैन- सरकार? « Media for all across the globe
भारतमा नेपालीहरु अलपत्र, दिल्लीमा दुतावास छ की छैन- सरकार?
विश्व नै कोरोना महामारीको कहरमा छ। यदि कोरोना भाइरस प्रक्रिया रोकिएन भने जीवन–जगत कै अस्तित्वमा संकट आउन सक्ने सम्भावना छ। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले सबैभन्दा धेरै पीडित बेसहारा र बेरोजगार नेपाल का युवावर्ग भएका छन।
भारतलगायत विश्वका धेरै देशहरुमा, यो कोरोना संकटपछि रोजगारीका लागि आवत जावत हुने असम्भव छ। यसलाई मध्य नजर गर्दै अब नेपाल सरकार राज्य सरकार र स्थानीय सरकारले सबै समुदायका युवा वर्गलाई रोजगारीको लागि स्वदेश मै व्यवस्थापन गर्न यो सबैभन्दा ठुलो चुनौती हुने छ।
देशमा प्रकृति अनुसार बाढी पहिरोको कारण धेरै परिवार नै रहेनन र जनधनको क्षति भएको छ। आर्थिक रुपले अहिलेको कठिन र संवेदनशील परिस्थितिमा नेपालले गरिब र भोकमरीको सामना कल्पना गरे भन्दा जटिल हुने अवस्था देखिन्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस का साथै बाढी पहिरोले गर्दा गरिबी र बेरोजगारी बढने निश्चित छ। त्यसको पहिलो शिकार गरिब मजदुर र दलित समुदाय हुने छन्र यसले आर्थिक मात्र हैन सामाजिक रूपान्तरमा दीर्घकालीन असर पार्ने छ।
हिमाल, पहाड र तराईका बहादुर नेपाली नागरिकहरु नेपालका विभिन्न ठाउँहरूबाट भारतको मुम्बई, पणे, गुजरात बेंग्लोर, दिल्ली, पन्जाब र हैदराबादलगायत अन्य ठाउँमा आएर श्रम गरिरहेका छन्। ती गरिव श्रमिकहरु घरेलु कामदेखि सबै काम गर्छन्। तर, कोरोनाबाट बच्न भारत सरकारले भारत बन्द लाकडाउन गरेपछि एका तिर कोरोना को डर अर्को तिर रोजगारी गुमेका मजदूरलाई दैनिक जीविका चलाउन गाह्रो परिरहेको अवस्था अहिले सम्म देखिन्छ।
भारतको पुणे, मुम्बई र दिल्लीलगायत विभिन्न शहरहरुमा नेपाली मजदूरहरु सिमा खुल्ला गरे लगतै नेपाल फर्के पनि र केहि भाडा तिर्न नसकेर हजारौको संख्यामा सर्वसाधारण नागरिक र अध्यन का लागि भारतमा नेपाली विद्यार्थी पनि अलपत्र परेको अवस्था सिर्जना भएको छ।
महामारीको यस संकट घडीमा भारत सरकारले कोरोना संक्रमण नरोकिएपछि अझै केहि राज्य र शहरमा लकडाउन गर्ने क्रम जारी छ। भारतको महाराष्ट्र राज्य कोरोना संक्रमितको संख्यामा पहिलो नम्बरमा छ। महाराष्ट्रमा नेपाली मजदुरलाई कोरोना संक्रमणका कारण काम गर्न धेरै कठिन परिस्थितिमा गुज्रिन परेको छ। त्यसैले यो संकटको बेलामा पनि भारतमा अलपत्र परेका नेपाली मजदुरहरुलाई नेपाल सरकार र नेपाली दुतावासले गम्भीरतापूर्वक नलिनु आफ्ना जनताको आफैले अपमान गर्नु हो। अहिले नेपाली जनता केवल भोटको लागि मात्र उपयोगमा ल्याएको अवस्था देखिन्छ।
भारतको दिल्ली स्थापित नेपाली दुतावासले भारतमा रहेका प्रवासी नेपाली मजदुरहरुको समस्याको समाधानका लागि न कुनै विज्ञप्ति र न कुनै सूचना छ। सर्वसाधारण जनतालाई दुतावासले चासो नदेखाको कारण नेपाली दुतावास छ की छैन भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था छ।
केहि दिन अघि नेपालमा प्रधानमन्त्रीले भारतको संवेदनशील मुद्धामा नेपालको दावी गर्दा भारतमा बस्ने लाखौ नेपालीहरु तनावमा छन र खतरा धेरै बढेको छ। नेपाल–भारतबीच बेला–बेलामा हुने खटपटले नबिग्रीएको सम्बन्ध अब भगवान रामबारे दिएको बयानले भारत चिढिएको छ। धेरै ठाउँहरुमा पहिलेको जस्तो सजिलै नोकरी मिल्नु मुस्किल छ र चलिरहेको नोकरीमा पनि नेपाली मजदुरको मुल्यांकन घडदो क्रमका साथै बोल्ने तरिका र गर्ने व्यावहार पनि फरक छ, तसर्थ भारतमा नेपाली नागरिकले सुरक्षित र सतर्क भएर बस्नुपर्ने वताबरण सिर्जना भएको छ।
नेपाल र भारत दुई देशबीचको घनिष्ट र रोटीबेटीको मैत्री सम्बन्धको भावनालाई मध्यनजर गर्दै ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य र नक्शामा आधारित सीमा मुद्धाहरूको कूटनीतिक समस्या को समाधान वार्ता अनुसार प्राप्त गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्दछ। भारत र नेपालले यो विवादलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले पारस्परिक वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्दछ। यो चिन्ताको विषय हो कि नेपाल र भारतले सधैं दीर्घकालीन उपायहरूबाट सम्बन्ध कहिल्यै बिग्रने छैन । भारत नेपाल बीचको सम्बन्ध र सीमा विवादको बारेमा जानकारी र यो सीमा विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा नेपाल-भारत सम्बन्धको सुधारको भारतमा नेपाली मजदुर सबै आशावादी छन्।
भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध पुरानो समय देखिको हो। सामान्य समयमा, दुबै पक्षका हजारौं व्यक्तिहरू रोजगारी, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, तीर्थयात्रा र पर्यटनलगायत विभिन्न कार्यहरूको लागि प्रत्येक दिन अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्छन्। त्यसकारण भारतमा नेपाली नागरिक भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध सुधारको अपिल गर्दछन् – यो २१ औं शताब्दीको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान सिद्धान्त आधारित देशलाई अगाडि बढाउनु हो। दुवै राष्ट्रहरूको धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक र ऐतिहासिक स्थितिमा धेरै समानताहरू छन्।
अब देशको भाग्य युवाको हातमा छ। युवाले देश को नेतृत्व गर्नु पर्छ र राष्ट्रमा कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई अन्त गर्दै, राष्ट्र निर्माणमा आत्मनिर्भर बान्न आफ्नो देशको माटोको लागि विशेष योगदान हुने छ र नेपालका सबै युवावर्गले कुनै जाती धर्म र भेषभुषासँग सम्बन्ध नराखेर नैतिकताको आधारमा समानताका साथ् एकजुट भएर आफ्नो बहादुरी कला सीप र मेहनत आफनै मात्रृभूमिमै शृजना गर्ने हो भने नेपाल देश विश्वको शक्तिशाली देश बन्न कसैले रोक्न सक्दैन।